-Eme ihe n'eziokwu na iTunes bụ otu nke kasị mma ngwá ọrụ itinye gị music na gị iPhone ma jikwaa gị songs. Otú ọ dị, ya òtù Achilles 'n'ikiri ụkwụ bụ na ọ na-achọ ka ị ga-ejikọ gị na kọmputa gị na iPhone, nke pụtara na ị ga-mmekọrịta gị iPhone na paired kọmputa. Ma, ị ga-atụfu songs na gị iPhone. Kedu ụdị ihe nwute bụ nke a! Bụ n'ebe ọ bụla ụzọ tinye songs ka iPhone enweghị iTunes? N'ezie, e nwere. Lelee ụzọ n'okpuru nyefee music ka iPhone enweghị iTunes.
Ngwọta 1. Tinye Songs ka iPhone enweghị iTunes, ma Wondershare TunesGo
Ngwọta 2. Ndị ọzọ na desktọọpụ ngwaọrụ-ekwe ka ị nyefee music ka iPhone enweghị iTunes
Ngwọta 3. E Nwere Cloud Services mmekọrịta Music Gị iPhone enweghị iTunes
Tinye songs ka iPhone enweghị iTunes syncing on Mac ma ọ bụ PC;
Nyefee ọ bụla song ọ bụla iPhone ọ bụla na kọmputa wihtout iTunes;
Detuo songs na otutu formats ka iPhone enweghị incompatibility mbipụta;
Import listi ọkpụkpọ na iTunes Library ka iPhone enweghị iTunes syncing;
Nyefee iPhone Songs ka Mac-enweghị iTunes
Nyefee iPhone Songs ka PC na-enweghị iTunes
Nzọụkwụ 1. Wụnye Wondershare TunesGo (Mac) na gị Mac
Pịa Download na-echichi ngwugwu nke Wondershare TunesGo (Mac). Ọ ga-enyere gị nyefee music ka iPhone enweghị iTunes na gị Mac. Mgbe wụnye ya, na-agba ọsọ ya ozugbo. Jikọọ gị iPhone na gị Mac site na gị iPhone eriri USB. Mgbe ahụ ị pụrụ ịhụ gị iPhone egosi na window nke Wondershare TunesGo (Mac).
Nzọụkwụ 2. Put Songs si Mac ka iPhone enweghị iTunes
Ọ bụrụ na ndị TunesGo (Mac) achọpụta rụọ gị iPhone ịga nke ọma, ọ ga-etinye gị iPhone na isi window. Site na isi window, pịa Music. Wee pịa Tinye ịchọta songs na gị Mac. Họrọ songs na pịa Ok na-etinye ha gị iPhone. Ọ bụrụ na a song adịghị n'ime iPhone akwado usoro, a popup ga-agwa gị na-arịọ gị ịrụ akakabarede. N'oge a, ị kwesịrị ị na pịa tọghata. Mgbe akakabarede, ọ ga-depụtaghachiri gị iPhone ọma.
Nzọụkwụ 1. Wụnye Ngwá Ọrụ ga-enyere gị Nyefee Music ka iPhone enweghị iTunes on PC
Wụnye Wondershare TunesGo na kọmputa gị na-agba ya. Jikọọ gị iPhone na gị PC site na iPhone eriri USB. Ozugbo ọma ejikọrọ, gị iPhone ga-egosi na isi window nke Wondershare TunesGo.
Nzọụkwụ 2. Copy Music ka iPhone enweghị iTunes
Pịa Media na ekpe sidebar. Mgbe ịpị, site ndabara, ị pụrụ ịhụ Music management window. Pịa triangle n'okpuru Add wee họrọ ma Tinye File ma ọ bụ Tinye nchekwa. Ọ na-adabere gị. Ọ bụrụ na gị na mkpa iji nyefee selectd songs si gị music collections gị iPhone, ị na-kwesŽrŽ pịa Tinye File. Ọ bụrụ na ndị songs ị na-aga na-etinye na iPhone na-anakọtara na a nchekwa, ị kwesịrị ị na pịa Tinye nchekwa. Mgbe ahụ, ị kwesịrị ị na-agagharị na kọmputa gị na mbubata songs gị iPhone.
MediaMonkey na-emekarị eji dị ka a media ọkpụkpọ maka Windows. Otú ọ dị, ọ na-eme ihe karịrị nke ahụ. N'akụkụ ime ka ị jikwaa gị music, videos, pọdkastị na ndị ọzọ na ọdịyo faịlụ, ya-enye gị nyefee music gị iPhone enweghị na-eji iTunes. Pịa Ngwaọrụ> mmekọrịta Ngwaọrụ, na mgbe ahụ ị pụrụ itinye songs na gị iPhone.
Mụta ihe banyere MediaMonkey >>
CopyTrans Manager na-ekwu dị ka onye nnọchi nke iTunes jikwaa iPhoneon. Ọ bụ n'ezie na-agbakwunye songs on iPhone. N'ihi ya, ọ pụrụ ịbụ ezigbo ngwá ọrụ n'ihi na ị na-etinye songs ka iPhone enweghị iTunes. Otú ọ dị, ọ bụ naanị ndị e mere ka mmekọrịta songs ka iPhone. E nweghị mmezi atụmatụ maka ya. Ọzọkwa, ọ dịghị egosi dị ka a standalone ngwá ọrụ, ma na-egosi na ndị ọzọ na ngwaọrụ mgbe ị wụnye ya. Iji ya, dị nnọọ pịa ya aha na interface ẹkedori ya. Ugbu a, ọ na-arụ ọrụ maka Windows PC.
Lelee CopyTrans Manager >>
SynciOS bụ ihe ọzọ na ezi transfer ngwá ọrụ ị nwere ike iji nyefee music ka iphone enweghị itunes. Ọ na-ekwe importing music site na kọmputa gị ka gị na iPhone mfe. Dị ka Wondershare TunesGo, ọ na-akwado ọdịyo faịlụ na otutu formats. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ nyefee music gị iPhone enweghị iTunes, ọ pụrụ ịbụ ihe ezi nhọrọ. Otú ọ dị, ọ na-adịghị na-enye dị ka ọtụtụ atụmatụ dị ka Wondershare TunesGo awade. Na ọ bụrụ na ị chọrọ na-agbalị agbatiri atụmatụ, ị ga-akwụ $39.95 maka Pro version. Ọ naanị na version maka Windows kọmputa.
Ele nkọwa ndị ọzọ maka SynciOS >>
Free bulite 20000 songs;
More songs $ 10 kwa ọnwa;
Google Play Music bụghị nanị ebe a na-ịzụta music ma kwe ka ị tinye aka 20000 songs na kọmputa gị ka ígwé ojii maka free mgbe ị banye maka a ọkọlọtọ na akaụntụ. Ị pụrụ wụnye Music Player na kọmputa gị iji bulite gị songs mbụ. Na mgbe ahụ wụnye Google Music ahịa, Melodies na gị iPhone na-egwu music na ị na uploaded akaụntụ gị na ígwé ojii.
Free bulite 250 songs;
$24.99 kwa afọ maka bulite 250000 songs maximumly;
Amazon Cloud Player-enyere gị aka bulite 250 songs na kọmputa gị ka ígwé ojii maka free. Ọ bụrụ na ị chọrọ bulite ọzọ songs si gị collection, ị ga-mkpa iji kwụọ ụgwọ $24.99 / afọ ruo 250000 songs. Ị nwere ike iji desktọọpụ Cloud Player bulite gị songs ka ígwé ojii. Ma wụnye Amazon Cloud Player maka iPhone ịhụ na-egwu ndị a songs ị na-etinye na gị iPhone.
Dropbox ọrụ dị ka a akpa ebe ị pụrụ itinye gị niile faịlụ. Ma ọ na nnọọ mma. Ọ na-eme gị stof n'ebe ọ bụla dị gị mkpa. Mgbe wụnye Dropbox na gị na desktọọpụ, ị nwere ike ịdọrọ na dobe gị songs na ya. Ma wụnye Dropbox na gị iPhone na mmekọrịta ya, ị ga-ahụ na gị songs bụ n'ebe na gị iPhone. Mfe, nri?
Otú nyefee Music site na kọmputa na-iPhone
Olee otú Detuo Music si iPhone ka iTunes
Top Ụzọ ndabere iPhone Photos ka Mavericks
Tansee iPhone Nyefee SMS Alternative
Olee otú onwe elu Space on iPhone
Olee otú Tinye Songs ka iPhone enweghị iTunes
Olee otú ndabere SMS si iPhone Tupu Jailbreaking iOS 7
Olee otú Jiri MOD Ntụgharị maka Mac iji tọghata MOD (moi) on Mac Mavericks
Olee otú Jikọọ camcorder ka Mac
> Resource> Mac> otú nyefee Music ka iPhone enweghị iTunes